GameMode 1.6 eweputala ya ma bia na ndozi njikwa ebe nchekwa | Site na Linux
E nweelarị GameMode 1.6 ma werekwa ndozi njikwa ebe nchekwa
Mgbe ọtụtụ ọnwa nke mmepe na iji dozie usoro ohuru nke oru n'ihi nsogbu ndi ozo Covid-19, Feral Interactive kpughere na nso nso a igba egbe ohuru nke Egwuregwu 1.6 nke ọ na-egosi na e mere ọtụtụ ndozi na njikwa ebe nchekwa, yana obere ndozi ahụhụ.
Maka ndị na-amachaghị GameMode, ha kwesịrị ịma na ọ bụ a ndabere usoro na integrates iche iche Tweaks na ntanetị na usoro tweaks iji bulie arụmọrụ egwuregwu.
Maka egwuregwu, a na-atụ aro ka ị jiri ọba akwụkwọ libgamemode pụrụ iche, nke na-enye ohere ịrịọ ntinye nke ụfọdụ njikarịcha na-ejighi ndabara na usoro ahụ n'oge egbu egwuregwu ahụ. Enwekwara nhọrọ akwukwo akwukwo iji mee egwuregwu a na onodu kachasi nma (itinye libgamemodeauto.so site na LD_PRELOAD mgbe ịmalitere egwuregwu), na-enweghị mgbanwe na koodu egwuregwu. Ntinye nke ụfọdụ njikarịcha nwere ike ịchịkwa site na faịlụ nhazi.
1 Banyere ụdị ọhụrụ 1.6
2 Etu esi etinye GameMode na Linux?
Banyere ụdị ọhụrụ 1.6
Na mbipute ọhụrụ a, na-egosiputa ikike inwe ike ịkpụgharị na nhọrọ logind ndị anaghị ejikọ na sistemu.
Na mgbakwunye, agbakwunyere ya nkwado maka ịgbanwe ndekọ ndekọ n'ọbá akwụkwọ maka ịba uru gamemoderun ma kpochapụ uru LD_PRELOAD na $ GAMEMODERUNEXEC.
N'aka nke ọzọ enwekwukwa ncheta njikwa ihe e tinyekwala akwụkwọ ntuziaka ọhụrụ maka ịba uru gamemoderun na agbakwunyela usoro egwuregwu egwuregwu anwale na ihe atụ.
Banyere nsogbu achọpụtara nke a ọhụrụ version na e wepụtara, o yiri ka ndị na-ọrụ nke Arch Linux na nkwekọrịta na-emelite GameMode 1.6 na - eweta nsogbu na igbu egwuregwu.
Ebe ọ bụ na mgbe ị na-achọ iji, njehie na-esonụ pụtara:
/ usr / bin / gamemoded: njehie mgbe loading na-akọrọ ọba akwụkwọ: libinih.so. 0: enweghị ike imeghe Amalite Ijekọ ihe faịlụ: Ọ dịghị otú ahụ faịlụ ma ọ bụ ndekọ
Iji dozie nsogbu a, a na-atụpụta ihe ngwọta oge, ị nwere ike ịkpọtụrụ nkọwa Na njikọ na-esonụ.
Banyere nkesa ndị ọzọ, ọ dị ka enweghị nsogbu ọ bụla ma ọ bụ na opekata mpebeghị.
Etu esi etinye GameMode na Linux?
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịnwale GameMode, ị nwere ike ịme ihe ndị a iji nweta ya na sistemụ gị.
N'ihe banyere Debian, Ubuntu na nkesa sitere na ndia, anyị na-wụnye dependencies na nke a iwu
Maka ndị rụnyerela ArchLinux, Manajaro ma ọ bụ ụfọdụ ihe eji emepụta ihe ndị a sitere na iwu a:
Mgbe maka Fedora, Korora, CentOS, openSUSE na nkwekọrịta anyị wụnyere:
Ugbu a, anyị ga-ebudata koodu isi nke ngwa ahụ site na ohere ya, iji mee nke a na ọnụ anyị na-eme iwu a:
Ma ugbu a anyị ga-emerịrị ọrụ ahụ na usoro ahụ na iwu ndị a:
Ozugbo ị wụnye ya na sistemụ gị ma ha ejiri ya rụọ ọrụ ahụ nke ọma, ị nwere ike ịgwa egwuregwu ọ bụla na ọ nwere ike iji GameMode mee iwu a:
I nwekwara ike ịgbakwunye ya dịka nhọrọ mmalite Steam maka egwuregwu gị ọ bụla, dị ka ndị a:
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịma nke onye nchịkwa CPU dị ugbu a na-eji, ị nwere ike ịgba ọsọ iwu a na njedebe:
Enwere ike ịhazi daemon ugbu a na-eji faịlụ gamemode.ini, nke a dị n'ime nchekwa ngwa ahụ "ihe atụ".
A na-ebufe faịlụ nhazi ma jikọta ya na akwụkwọ ndekọ aha ndị a, ka ewere:
Na faịlụ a, anyị na-ahazi gọvanọ ma na-enye anyị ndepụta ojii iji ewepu egwuregwu ndị ahụ anyị achọghị GameMode iji gbaa ọsọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » E nweelarị GameMode 1.6 ma werekwa ndozi njikwa ebe nchekwa
Blurtooth a BT nke na-eme ka ndị na-agba ọsọ jikọọ na ngwaọrụ ndị dị nso